Author: Tojaran Fenriramar
Waxka Beddelka Dastuurka Qodobka aad.
Dastuurkani wuxuu asaasayaa Golaha Adeegga Garsoorka. Sidaas darteed, muwaaddin kasta waxaa waajib ku ah in uu: Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee spomaaliya yaalla dawlad-goboleed kasta.
KALA-GUUR Sida waafaqsan dwstuurka iyo aad, Baarlamaanka fadaraalka Soomaaliya waxa dastuur,a soo jeedinayaa dhaqan-gelinayaana wax-ka-beddel ku aaddan Dastuurka ku meel-gaarka, hab waafaqsan heshiiskii ay ka wada-xaajoodeen Dowlladda Fedderaalka ah iyo Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee jira iyo kuwacusub, oo, balse aanan ku koobnaynqodobbadan soo socda: Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka.
Wada-xaajoodyada Caalamiga 1 Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada dastuyrka tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah.
Deegaanka 1 Xukuumadda Federaalku waxay mudnaan siinaysaa ilaalinta, keydinta iyo dhawrista Deegaanka, iyadoo laga ilaalinayo wax kasta oo wax u dhimaya kala-duwanaanshaha noole ee dabiiciga ah iyo hannaanka deegaameed ee dabiiciga ah.
Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rukumo Carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin. Maamulka dadweynaha3. Dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Durid Sharci 1 Sharci maray habraaca ansixinta sharciyada iyo dhaqangeliddaba waxaa lagu duri karaa oo keliya inuu ka soo horjeedo Dastuurka.
Ka warbixinta cabashada iyo waxyaabaha uu adeegaha gardoonka dadweynaha ka ogaadey arrinta, una gudbiyo madaxda qofka dembiga geystey; 3. Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Golaha Shacabku ee Baarlamaanka Federaalku wuxuu matilaa dhammaan shacabka Soomaaliya, Awoodda sharci-dejinta ee Golaha shacabku keligii leeyahay waxaa ka mid ah: Siyaasaddaasi waa in ay xaqiijiso: Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka waa in ay doortaan labada Gole ee Baarlamaanka oo wada fadhiya, waxaana guddoominaya fadhigaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah.
Suggidda Amniga Jamhuuriyadda Federaalka 1 Xukuumadda Federaalku waxay damaanad-qaadaysaa nabadda, gobannimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo bedbaadinta shacbigeeda, iyadoo la adeegsanaayo adeegyada ciidammada amniga oo ay ku jiraan: Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah.
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Kalfadhiyada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Golaha cusub ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka, fadhigiisa koowaad waa inuu ku qabsoomaa 30 maalmood gudahood, kaddib marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada guud. Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha.
Click here to sign up. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Maxaa ka soo baxay shirkii dib u eegista dastuurka Soomaaliya?
Skip to main content. Iyadoo dasturuka tixraacayo Dastuurka, Guddiga Xuquuqda Aadmiga, wuxuu yeelahanayaa awood uu ku fuliyo hawlahan: Qodobada ku dabaqma wax ka beddelka Dastuurka ee lasoo jeediyay dhammaadka xilliga koowaad ee Baarlamanka Federaalka Your email address will not be published. Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa dasthurka tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Xeer-hoosaadka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalku waa in uu samaystaa dasyuurka, kaas oo ka-qaybgal buuxa siinaya xubnihiisa. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Qodobka soomaaliyx, faqradiisa 5aad ee dasruurkaas waxaa ku qoran waxyaabaha madaxweynaha lagu maxkamadeyn karo iyo habraaca loo marayo sida khiyaamo qaran.
Dhaarta Raisul-Wasaaraha iyo Golihiisa Wasiirradu markay helaan codka kalsoonida inta aysan xilkooda bilaabin, waxa lagu dhaarinayaa kalfadhi gaar ah ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah, waxaana dhaarinaya Gudoomiyaha Maxkamadda sare, dhaartaasina waa sidatan: Xildhibaannada qaar ayaa sidoo kale soo-jeediyey, in inta mooshinka xilka-qaadista ee xildhibaanadu soo gudbiyeen barlamaanku uga codaynayaan in uusan sameyn karin qodobada soo socda:.
Xaqa Dacwadda iyo Isdifaaca 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan ka furto maxkamadaha awoodda u leh. Xubnaha Guddiga Xuduudaha iyo Federaalaynta; 5. Guddiga dib-u-eegista iyo Hirgalinta Muddada xilhaynta 1 Muddada xil-haynta Baarlamaanka Federaalku waa afar sano oo ka bilaabata maalinta natiijada doorshada lagu dhawaaqo. Shirkan oo ay ka qeyb galeen ergo gaareysa saddex boqol oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa waxaa la isku raacay in ugu dambeyn sannadka ka la soo gabagabeeyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
Dhaarinta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Golaha Wasiirrada 1 Awoodda fulinta ee Jamhuuriyadda Federaalka ah soomaxliya leh Golaha Wasiirrada, waxayna u qabanayaan sida Dastuurka ku tilmaaman.
Muddada Xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii dastuur,a dhaariyo xafiiska. Dhaqangelinta Dastuurka 1 Ka dib dhammaadka muddada koowaad ee Baarlamaanka Federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, Baarlamaanka Federaalku waxaa uu dhisayaa Guddi dib- u-eegis ku sameeya hirgelinta iyo shagaynta Dasturka jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya, marka lagu ansixiyo hab waafaqsan qodobka ee ku saabsan qaadashada Dastuurka kama dambaysta ah, iyo in lala tashado dawladaha xubnaha ka ah Federaalku ka koobanyahay iyo dadweynaha wax-ka-beddelidda in lagu sameeyaa ay suurtogalka tahay.
Iscasilaadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Madaxweynuhu wuxuu dashuurka gudbinayaa istiqaaladiisa Barlamaaanka Federaalka, isaga oo marsiinaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah. Taariikhda fadhiga la qabanayo waxaa goynaya Guddiga Qaranka ee Madax-bannaan ee Doorashooyinka. Ku-simaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya, Maxamed Mursal ayaa sheegay in uu dastuurak rasmi ah u furanyahay dib u eegista dastuurka Soomaaliya, ayna jiraan qoddobo ay soomxaliya baahanyihiin inay ka wada hadlaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soomaaliya kajira, six al looga gaaro.
Waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobannimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ama u adeegsadaan si u gaar ah. Guddiga waa inay guddigu ka madax banaanaadaan waaxda fulinta waana inay maamushaan maaliyadooda u gaarka ah. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu soomaaaliya uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa.